HomeWararka CiyaarahaBayern Munich, Juventus ayaa diyaar u ah inay Antonio Rudiger u soo bandhigaan £ 400k toddobaadkii
September 26, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Bayern Munich iyo Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhawaaqeen xiisaha ay u qabaan daafaca Chelsea Antonio Rudiger , iyadoo xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka uu ku dhow yahay dhammaadka qandaraaskiisa Blues.
Ka dib markii uu ka soo muuqday guushoodii Champions League ee xilli ciyaareedkii hore, Rudiger ayaa galay sannadkii ugu dambeeyay heshiiskiisa Stamford Bridge waxaana la sheegay inuu diiday dalabyo dhowr ah si uu u raadiyo mushaar sare.
Tababaraha reer Jarmal ayaa lagu soo waramayaa inuu muujiyay rabitaankiisa ah inuu ka mid noqdo kuwa ugu mushaharka badan kooxda Thomas Tuchel , taasoo Blues siineysa go’aan adag oo ay gaaraan, kooxaha reer Yurub ee Bayern Munich iyo Juventus ayaana hadda doonaya.
Sida laga soo xigtay The Mirror , labada dhinac ayaa diyaariyay baakadaha mushaharka toddobaadkii £ 400k si ay u siiyaan 28 jirka, taas oo ka badan saddex jibaar mushaharka uu hadda qaato.
Iyadoo heshiiskiisu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan, naadiyadu waxay xor u yihiin inay kala hadlaan heshiis hordhac ah daafaca dhexe ka dib dhammaadka sannadka.
Rudiger ayaa ka soo muuqday 19 kulan oo Premier League ah Blues xilli ciyaareedkii hore, isagoo dib ugu soo laabtay kooxda ka dib magacaabistii Tuchel, wuxuuna ku soo bilowday mid kasta oo ka mid ah sideedii kulan ee ugu horreeyey tartamada xilli ciyaareedka cusub.